हामी यस्तैमा छौँ साथीहरू ! | परिसंवाद
हामी यस्तैमा छौँ साथीहरू !
डा. मुकेशकुमार चालिसे	 बुधबार, माघ २६, २०७८ मा प्रकाशित
उमेर बढी हुँदै गएपछि शारीरिक क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ, अझ् रोगव्याधले गाँज्न सक्छ । यो जीवित प्राणी सबैको स्वभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यस्तोमा हामी मानिसले दुःख, बिलौना र निराश हुनुहुँदैन् । पाको उमेर भईसकेपछि तपाईप्रति गरिने व्यवहार समाज र घरपरिवारमा फरक पर्दै जान्छ । मानिसको स्वभाव बर्गस्रोत, हुर्काइ, सामाजिक बनावट तथा सिकाइमा निर्भर गर्छ । त्यसै अनुसार पारिवारिक सदस्यहरूको चरित्र निर्माण हुन्छ । राम्रो परिवार भनिने हरेक घर एकाइमा बर्गस्रोत मिलेको होला वा विभिन्न कारणले छोटो अवधिमा बर्ग परिवर्तन भएको नहोला वा सामाजिक उथुलपुथलबाट जोगिएको परिवार होला वा निर्देशित पारिवारिक अनुशासन होला ! सामाजिक मानवीय चरित्रमा विकसित समाज व्यवस्था भएको ठाउँमा तपाई पाका महिला पुरुष मानिसको उपस्थिति संरक्षक, आदरणीय, अनुकुल र सह्य हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा पाका मानिसहरूको समय र अवस्था बहुत ईज्जत र आरामले व्यतित हुँदोरहेछ । सप्ठेरोमा कायम राख्न सिपालु हुनुपर्छ र बिब्ल्याँटो पर्दा भने त झन बढीहोस् पु¥याउनु पर्छ ।
तनावको त्यो बेला
तपाईले पहिला कति व्यहोर्नु भयो होला, सम्झेर ल्याउँदा छक्क लाग्छ । स्कूले केटाकेटी हुँदा गृहकार्यको टण्टा, अक्षर राम्रो भएन भन्ने पिर, शिक्षक शिक्षिका खटनपटन, गृहकार्य राम्रो नराम्रो, उस्तैपर्दा दण्ड, साथीभाइ बीचमा लुगाफाटो, सुबिधा र पढाई स्तरकोे प्रतिस्पर्धा, पासफेलको चिन्ता, के के थियो ? हिजो घरभित्रका मान्यजन र बेलामौकामा आउने पाहुनालाई अभिवादन समयमा नै नगरे कति दनक पाइन्थ्यो, सम्झौँ । घरबाट निस्केदेखि मान्यजन र आफूभन्दा ज्येष्ठलाई ढोग, प्रणाम, नमस्कार, जेजस्तो चलेको थियो त्यहीअनुसार गर्दागर्दा हात र मुन्टो गलेर विद्यालय पुग्यो त्यहाँ भेटेजति शिक्षक शिक्षिकालाई फेरि त्यही प्रक्रिया गर्दा कति हैरान लाग्थ्यो ? परिक्षा त कालजस्तै हुने, पासभए सबै विषयमा उस्तै वा माथिल्लो अङ्क आयो आएन, नआए किन आएन आए पहिलो भइयो कि भइएन ? विद्यालयमा मात्र होइन घर र नातागोतामा समेत स्पष्टीकरण दिँदादिँदा एक त्रैमासिक नै जान्थ्यो ।
विद्यालय सक्यो अनि कुन विषय र कुन क्याम्पस पढ्ने भन्ने चिन्ता, राम्रो क्याम्पसले भर्ना नगरिदिएला भन्ने पीर । भर्नाहुन पनि भनसुन गर्नुपर्ने हो कि ? भर्ना शुल्क जति भएपनि धेरै लाग्ने, कसैलाई भनेर घटाउन सकिएला कि ? विद्यालयभन्दा फरकखालका विषय र फरकफरकले पढाउने भएर कुनै आफू बुझ्ने कुनै भेउ नपाउने, अब के गर्ने ? फेरि ट्युसनको चटारो । घरले मान्ने वा सक्ने नसक्ने अतिरिक्त शुल्क ब्यहोर्न? उफ, कतिथरीको तनाव? विज्ञानमा भए छात्रबृत्तिमा डाक्टर, ईन्जीनियर हुने प्राप्ताङ्क आयो आएन? कि आफ्नै खर्चमा पढनुपर्ने भयो? फेरि घरले धान्न सक्छ सक्दैन? व्यवस्थापन र मानविकीतिर भए जसोतसो पास भएपछि लोकसेवा लड्न वा कतै भनसुन गरेर यसो झुण्डिने ठाउँ मिल्छ कि?
विद्यालय सक्यो अनि कुन विषय र कुन क्याम्पस पढ्ने भन्ने चिन्ता, राम्रो क्याम्पसले भर्ना नगरिदिएला भन्ने पीर । भर्नाहुन पनि भनसुन गर्नुपर्ने हो कि ? भर्ना शुल्क जति भएपनि धेरै लाग्ने, कसैलाई भनेर घटाउन सकिएला कि ? विद्यालयभन्दा फरकखालका विषय र फरकफरकले पढाउने भएर कुनै आफू बुझ्ने कुनै भेउ नपाउने, अब के गर्ने ? फेरि ट्युसनको चटारो । घरले मान्ने वा सक्ने नसक्ने अतिरिक्त शुल्क ब्यहोर्न ? उफ, कतिथरीको तनाव ? विज्ञानमा भए छात्रबृत्तिमा डाक्टर, ईन्जीनियर हुने प्राप्ताङ्क आयो आएन ? कि आफ्नै खर्चमा पढनुपर्ने भयो ? फेरि घरले धान्न सक्छ सक्दैन ? व्यवस्थापन र मानविकीतिर भए जसोतसो पास भएपछि लोकसेवा लड्न वा कतै भनसुन गरेर यसो झुण्डिने ठाउँ मिल्छ कि ? कति चिन्ता र पिर ? यसैमा चौथाई जीवन सखाप । जागिर खायो, घरी हाकिमको नसिहत, घरी तनखा आयो होला भनि साथीभाइको खाइद्यौ पार्टीको माग, अनि सङ्गत उस्तै परे सप्ताहान्तको रमाईलोमा हारेर ढाड सेक्ने ।
यसैबीच उमेर पुगेपछि कि आफैं रोजेर कि घरको आदेशमा जोडा भित्र्याउनु वा लाग्नजानु । जोडिन आउनेलाई नयाँ घरको रहनसहन बुझ्दैको फजिती, तलमाथी पर्दा पहिलाको घरको समेत ईज्जत जाने डर । रहँदाबस्दा समयमा सन्तान नभए अर्को खालको गनगन घरपरिवार र नातागोताको । त्यसका लागि दौडधुप, भएपछि फेरि हुर्काउने, पढाउने र आफूले नसकेको गरोस् भन्ने फोस्रो आकाँक्षाको तनाव । सन्तान वयश्क हुँदैगर्छन्, भएको रेखोपाखो बेच्नलाएर अथवा बाबुआमाले ऋणलिएर भएपनि उछिट्टिन खोज्नेहरू स्वर्ग देशतिर हान्नीईसकेका होलान् । हेर्नोस् त फोस्रो तनावले नछाडेको ? आफू उमेर पाक्दै, जसोतसो पदोन्नति हुँदै आधा उमेर पुग्दा निबृत्तिभरण पाएर वा उपदानमा लुब्रेकान लाएर अवकाश पाउने ।
अब त तपाईहरूको त्यस्ता तनाव हुने उमेर रहेन । जोडा पनि बर्गस्रोत अनुसार मिलेर उस्तै संस्कार अनुसार भएको थियो । पाको उमेरमा झन बढी माया र आफ्नोपन हुने भयो । स्वभाव र बोलीचालीले त दाजुबहिनी जस्तो, झण्डै परेवा र ढुकुरको जोडीजस्तो, बचेराहरूले छोडेपनि जोईपोई पिरती । एकअर्कामा कस्तो एकज्यानको प्रेम उम्लिने, देख्नेले पनि ईश्र्या गर्ने । त्यतिन्जेल कि केटाकेटी कोही उन्नति गर्न भनी परदेश वा कोही घरबाटै केही गर्दै होलान् । घरी ‘तेल भिसामा विदेश’को रमाइलो नभए यतै हल्लेर खानबस्न पाएकै छौँ । जे छ, जति गरियो, त्यसैमा आनन्द, परेको गर्ने भरपर्दा छँदैछन् । पाका मानिसलाई केही पर्दो रहेनछ थप गर्न । बाहिर निस्कन मनलागे बिस्तारो यताउति हेर्दै हिँँड्यो, पहिला अरुलाई अभिवादन गर्दा थाक्ने हात अब फर्काउँदाको हैरान् । अबत तपाईको उमेर र शारीररिक मापनबाट अरुको भाष्यमा गजब परिवर्तन आइसकेको पाउनुहुन्छ, ‘दाइ कतासम्म ? खुट्टा तन्काउनु पनि पर्छ, राम्रै हो’ अथवा ‘बा टाढै लाग्नुभयो, कहाँसम्म ? अचेल हजुरलाई नदेख्या धेरै भयो, आरामै हुनुहुन्छ ?’ अहा ! कति आदरकासाथ खोजिनीति । पसलतिर गएपनि अभिवादनसहित ‘के टक्र्याउँ बा ? धेरै पो भयो त आउनै छाड्नु भयो, सन्चोसुबिस्तै हुनुहुन्छ नि ।’ किनमेल गर्दा पनि केही रकम पुगेन भनेपनि, ‘सामान लगिराख्नोस् अर्कोचोटी आउँदा दिनुहोला बा’ भन्छन्, कत्रो विश्वास ! उस्तै उमेरसमूह भेटहुँदा कुशलमङ्गल, सुविस्ता बाहेक कमाई धमाई, दौडधुपको कुरै नहुने । कतै बाटोतिर पर्खनु परे वा टहल्दा नचिने पनि गफ हुने । शारीरिरक अवस्था अनुरुप कतिको भइयो भनी सोध्न र भन्न अप्ठ्यारो नलाग्ने । नचिने पनि एकछिन सँगै परियो भने त सबै परिचय मज्जाले खुल्ने । कस्तो प्रेमपूर्ण मानवीय समय रहेछ पाको उमेर, गर्नेले ईष्र्या नै गर्छन् होला !
पहिला बाआमा वा सासूससुराले धानेको निम्तानाम्ती मान्नजाने काम अब अली बढी पर्नसक्छ । अन्तिम छिनोफानो र घर प्रतिनिधित्व आफ्नै जिम्मा, टोल छिमेकमा बरिष्ठहरूको जमघटमा भ्याइनभ्याई । घरमा होस् कि समाजको सामुहिक निर्णयमा उपस्थित हुनैपर्ने । कसैको पिरपिराउ, अप्ठ्यारोमा अर्तिउपदेश र ढाडस दिन छुट्न नहुने । कस्तो जिम्वेवारीपूर्ण आदर सबैतिर ! जिम्वेवारी पनि थपियो, अब सम्झेको ठाउँमा नगए चर्चा हुन्छ र अर्को पटक भेट्दा प्रष्टीकरण नभई को मान्छ र ? हरेक मालसामानको ठिक मूल्य निर्धारण गर्न र किन्न पाको उमेर नै चाहिने । मज्जाले मोलमोलाई गर्न न अप्ठ्यारो न किशोर बेला जस्तो फोस्रो लाज, उल्टो आदरपूर्वक ईतिबृत्ति थाहा पाईने । अचेल महङ्गा सामान किन्न घरकाले त ‘आफ्नो मिल्ने समय सोधेको वा सँगै दुःख गरिदिनोस् न’ भनेको क्या आनन्द लाग्छ । सानातिना त सल्लाहले चल्छ, ठूलो काम आँटे त ‘तपाई नगई कसरी आँटनु’ भन्छन् आफू नगई हुन्न, उनीहरू साह्रै भर गर्छन् । आफ्नो पाकोपनको कदर भएकोमा ‘आफू अझै महत्वराख्छु’ भनी मख्ख परिएन त !
बाटोघाटो हिँडदा महिला वा पुरुष जोसँग पनि निर्धक्क कुरागर्न कुनै बारबन्देज छैन्, पहिला त विपरीत लिङ्गसँग नजिक पर्न पनि शरम लाग्थ्यो । झट्ट नजिक परे अनुहारनै रातो हुन्थ्यो, अहिले त बसमा सँगै कोचिँदा पनि केही हुन्न । शरीरले पनि कति अनुकुलन गरेको ? आफ्लाई केही फरक लाग्दैन । एकछिनमा नै गफिन सुरु गर्दा त्यस दृश्यमा कम उमेरका छक्क परेर कर्केपरेर हेर्छन्, आफूलाई अचेल त उदेकलाग्छ ती केटाकेटीका चाला देखेर । फर्केर आयो घरमा मान्नुपर्ने कोही छैन, उल्टो ‘ओहो ! धेरैबेर भयो त, केही खाजापानी चाहिन्छ कि, के बनाउँ ?’ भनेर अनुरोध पो गर्छन् । केही खाएको भए ‘भैगो, केही लिएँ साथीले भनेर’ भन्यो, नत्र ‘यसो छिटोछरितो बनाउ नत’ भन्दा उनीहरू ठूलै अवसर पाएझैं’ कार्यान्वयनमा जुट्ने । यो भन्दा आनन्द के होला ? हो, शारीरिक अवस्था र रोगका कारण माया गरेर सुविधायुक्त् ज्येष्ठनागरिक केन्द्र पु¥याउन सक्छन् । यसमा चित्त कम दुखाए हुन्छ, सुबिधै हुन्छ ।
बिब्ल्याँटो सामाजिक र पारिवारिक अवस्थामा तपाई निश्चितरुपले तेतव्य (तेस्रो तहको व्यक्तित्व) नै हो । विभिन्न कामको सिलसिलामा एउटा हुरीमा आएर जोडा बाँधिन्छ, उमेर छउञ्जेल आआफ्नो कामको चटारोले दोहोरो कुरा र वादविवाद नै हुन पाएको हुन्न । अब घरमा नै डल्लिने समय क्रममा आफ्ना मौलिक बर्गचरित्र, हुकाइ र सिकाइ सबै उदाङ्गिन्छन् । अनि बातैपिच्छे क्वारक्वारको दन्तबजान ! एउटाको कुरो अर्कोले सुन्नै मन नलाग्ने । तपाईको सकारात्मक र मौन उपस्थिति ग्राह्य भएपनि प्रश्नबाचक वा नकारात्मक हस्तक्षेप बोझ मानिन्छ । तपाई आफ्नो हुर्मत भएको महशुस गरी निराशा वा ग्लानी अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईको बाँकी जीवनका लागि यो शुभ होईन । त्यसमा अभ्यस्त हुनुपर्छ र ‘अति भएको’ लाग्छ भने त्यस्तो परिस्थिति हुने ठाउँमा अनुपस्थित हुनु आफैंलाई फाइदा पु¥याउनु हो । बरु एक्लै आफ्नो लम्पसार कक्षमा रहनु राम्रो, सके सीप अनुसार केही गर्दैबस्ने वा विगतका सुखमय र उत्पादनशील काम सम्झदै ओच्छ्यानसाथीको प्यारो हुने । यस्तोमा बाहिर निस्कन मिले आफ्नो कुरा मिल्ने दौँतरी वा चिनजानका मानिसहरू साथी बनाइ समय काट्नु उत्साहजनक हुन्छ । ‘भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’ भन्ने उखान नबिर्सनु राम्रो हुन्छ है र कार्यान्वयन गर्न पछि नपर्नोस् नि ।
बलियाबाङ्गा विभिन्न बहानामा परदेश लागिहाले कहिले पिण्ड छुटाउँ बुढाबुढीको भनेर, बचेका कोही भए होस् गर्नोस् । आफूले धेरै मिहेनत गरेको र अहिलेको पारिवारिक सामाजिक स्थिति फरक बनेको कुरा मनमा राख्नु बेश होला । बजारको हावाले परिवारका अरु सदस्यहरू र नातागोतालाई नराम्ररी गाँजेको हुनसक्छ ! तपाईले धेरै समय लगाएर दुखजिलो गरी ईट, काठ, सिमेण्टले बनाएको सुन्दर गृहधाम अहिले त्यस्तो प्रभाव भएकाहरूलाई खण्डहर हुनसक्छ ! तपाईले ‘आफ्ना साना दुखले अघि बढेको होइन त’ भनी कुरा गरिरहनु भयो भने ‘हाम्रा करले बनाएको होइन त, यस्तो छन्द नबन्दको घर, फलानाको कस्तो राम्रो’ भनी बाँणहनाई किन खानुहुन्छ ? ऋण गरेरै भएपनि किनेको सवारीसाधन वा परिवारलाई सुखदिन जोडेका वस्तुभाउ अब थोत्रा र काम न काजका हुनसक्छन् । निर्दयतापूर्वक रद्दीको भाउमा फौबञ्जारलाई हुत्याउँदा पनि सहनुबाहेक केही नभन्नु राम्रो, नत्र ‘सँगै लैजाने मन छ र !’ भनी छेडहान्दा कस्तो होला ? हृदय कलुषित नै भएका परे भने त बृद्धाश्रम र सदाबर्ते मन्दिरमा पुग्न के बेर ?
अनुकुल परिस्थिति छ भने कायम गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग तथा सकारात्मक कोशिस निरन्तर गरिरहनु होस् । हिजो आफ्नै ईच्छा आवश्यकता र अभिभावकप्रतिको कर्तव्यस्वरुप विभिन्न प्रकारले मिहनतगर्दै निर्माण गरेको घरगृहस्थी अझै सुखमय बनाउन आफ्नोतर्फबाट सकेको योगदान थप्नुहोस् । जिम्वेवारी क्रमैसँग हस्तान्तरण न्यायसङ्गत र पक्षपातरहित गरी हलुका हुँदै जानुहोस् । परिवारका सदस्यहरू बीच तथा मिल्ने साथीहरू बीच असमान र चित्त दुख्ने व्यवहार वा आशय कहिल्यै प्रकट नगर्नुहोस् । सकेको सहयोग नै गर्नुहोस्, सकिन्छ भने ‘आँखामा हाले पनि नबिझाउने’ वा ‘नौनी भन्दा नरम’ व्यवहार कायम राख्नुहोस् । पहिलेजस्तै वा त्यसभन्दा बढी तपाईको भद्रता र अनुभवसिद्ध ज्ञानको प्रशंसा बढदै जावस् । कम्तिमा हरेक समस्यामा गाँठो फुकाउन तपाईका सल्लाह रामबाँण बनुन र अन्तिम अवस्थासम्म हाईहाई भईरहोस् ।
प्रतिकुल र बिव्ल्याँटो अवस्था आइसक्यो भने तपाईका सरसल्लाह अथवा निर्णय बिस्तारै बेवास्ता भएको पाउनु हुन्छ । उस्तैपर्दा प्रतिकार हुने स्थिति छ भने अब तपाईको हैसियत पहिलेजस्तो छैन र सत्ता पल्टिसक्यो भनी बुझ्नुहोस् । अझै ती आफन्त वा साथीभाइले उस्तै गर्लान भनी आश कम गर्नु राम्रो हुन्छ । हिजो तिनैका लागि मरिमेटेर गर्नुभयो, नितान्त आफ्ना इच्छाहरू र आवश्यकता बलिदान गरेर उनीहरूलाई खुसीपार्नु भयोहोला । त्यस्ताकुरा गम्ने हो भन्ने वा घुर्किलगाउने होईन, बुझ्नोस् तपाईको परिस्थितिले थप बलिदान मागिरहेछ । अब गरिने वलिदान हुन; अहम, आदेश, स्वअधिकार, मानपाउने आशा र म पनि केही हुँ भन्ने बुझाइ । निराशा र चित्त दुखाइको जड नै अरुको आश गर्नु र बढी भरपर्नु हो । अहिलेका खानपान, लवाइखवाइ, हिडाइबोलाइ, कामधाम आदिबारे सुन्न इच्छा गरेमात्र आफूलाई लागेको भन्नुहोस् नत्र चुपलाग्नु राम्रो हुन्छ । घरभित्र पनि खानपानमा तपाईको अनुकुल नभए कम लिनुहोस्, यदि विकल्प बन्दैन भने, स्वइच्छा मनमै राख्नुहोस् । बरु सके मनपर्ने हलुका खानेकुराको जोहो औषधिजस्तै आफैं गरिरहनु होस्, नत्र भोकै सुत्न र औषधी अभावले गाह्रो होला । यो उमेरमा निन्द्रा नपर्नु र रोगको औषधी नपाउनु चाँडै काल निम्त्याउनु हुन्छ ।
नियमित प्रयोग गर्ने लुगाफाटा र लवाइमा आफ्नो अनुकुलका सफा पारेर जोगाएर उपयोग गर्नुहोस् । होला, तपाईको सक्रिय जीवनहुँदा अझ विशेषगरी आम्दानी गरिरहँदा तिनै मानिसहरू तपाईको इच्छा अनुसार नगरेपनि सुनिदिन्थे होलान् । कम्तीमा आफ्नै स्वार्थका लागि पनि उनीहरू प्रतिकारमा उत्रने थिएनन् । अब, तपाईको अप्ठ्यारो अवस्थामा उनीहरूबाट मुखछाड्ने वा भौतिक अपमानमा उत्रने घटना नआवोस् भनी हेक्का गर्नुहोस् अवस्था दोहोरो भिडन्त हुनसक्ने दुर्घटनालाई ननिम्त्याउनु होस् वा न्यून गर्न कोशिस् गर्नुहोस् ।
अनुकुल हुँदा त्यस्तो सम्बन्ध कायम राख्न आफू पनि अरुलाई बाधा नपु¥याई लागिपर्नुहोस् । शरीरिक क्षमताले भ्याएसम्म बाहिरफेर घरायसी श्रमगर्न उत्सुक हुनुहोस् । प्रतिकुल हुँदा र कमजोर अवस्थामा पहिला तपाईको ज्ञान, अनुभव र सीप जे थियो त्यसलाई ब्युँताउनु होस् । आफ्नो समय पलपल त्यस्को उपयोग गर्न, प्रयोग गर्न, उपयुक्त ठाउँमा प्रचार गर्न र मिल्नेहरूका बीच भलाकुसारी गर्नतिर लगाउनु होस् । आफ्ना अनुभवका आधारमा यसो भएन उसो भएन भनी पहिलेका कुरासँग दाँजेर कसैको हुर्मत हुने र तपाईका म्याद गुज्रिएको ठानिने विचार बदल्नु राम्रो हुन्छ । सकेसम्म उल्टो परिस्थितिमा वचनका बाण थेग्न गाह्रो हुने गरेर आफू प्रस्तुत नहुँदा शान्ती मिल्ला । अरुले निहुँ खोज्ने हिसाबले कुनै बोलीवचन र व्यवहार नगर्नोस्, सहनु पर्छ, अब सबथोक ! किनकी अब तपाई कमभन्दा कम दुखपाएर बाँचुञ्जेल स्वआनन्दमा बाँच्नै पर्छ । मर्नुभन्दा अघि पलपल मर्ने र मरेपछि के होला भन्ने चिन्ता नलिनु राम्रो, तपाईले त्यसो गरेमा आफैंलाई पीडामात्र थपिने हो । अब, यस्तैमा रमाउँ है !
चालिसेडाँडा, ललितपुर ।
एमसिसी ल्याम्ने देउवा र दाहाल, अब्जस पाम्ने ओली !
एमसिसी पनि परमादेशबाटै पड्काउँ कि क्या हो !